Iowa Governor Kim Reynolds mana Dhugaati fi mana nyaata erga sababa Covid-19 cufamee booda akka | KWIT
Iowa Governor Kim Reynolds mana Dhugaati fi mana nyaata erga sababa Covid-19 cufamee booda akka
By Fatiya Adam • Sep 15, 2020
Iowa Governor Kim Reynolds mana Dhugaati fi mana nyaata erga sababa Covid-19 cufamee booda akka guyyaa boruu Counties jaha keessa afur kesatti akka irra deebiami banamu himte.
Mannen dhugaati Polk, Linn, Black Hawk fi Dallas Counties guyyaa borii se’aati 5:00 pm kan banamu ta’a. Mannen dhugaati counties Story fi Johnson keesa, manneen university Iowa keesafi university of Iowa ammaaf akkuma cufame jira.
Torbaan darban baaye kana keessati, coronavirus warii Hojii Humnaa yknTask Force kan White House manneen dhugaati counties 99 kan Iowa keesa akka cufamu godhamee ture.
Sirnaan Iowa fi kan adunyaa akka jedheti virus baayenin mana dhugaati keessati daddarba. Dubattaan deparmanti mana fayya Iowa akka jedheti state task White House irraa turban kana kan fudhatu ta’a.
Ogeesi fayyaa state Iowa akka dubatteti namni dabalataan Iowa keessati sababa Covid-19 baayanin kan du’an yoo tau kan haarawa qabame ammo seaati 24 keessati nama 500 ol akka tae gabaase. Waliigalatti namni due 1,233 gaheera.
Counties Iowa shan keessati guyyaa 14 darban kana keessati namni virus qabame parsantii 15% akka tare gabaasan. warreen sadarka jalqaba hanga shanii jiran Sioux, Lyon, Plymouth, fi O’Brien Counties dha. Sioux County lakkoofsa guddaa jalqaba irra kan jirtuudha inis parsanti 24% dha.
Governor akka ajaja keniteti mana barumsa K-12 tiif akka state barattoota gara online tiin ajaja argataniif, kuni ta’uun counties jaraa guyyaa 14 walirra qabee corona virus qabaachu yookan xiqaatu parsanti 15% qabaachu fi Aanan barumsa dirqama parsantii 10% barattooni sababa dhukkubaa yoo kan haftu taate.
Woodbury County kesati namni qabame parsiin jaraa 13% gaheera.
Manni fayyaa Sioux land akka gabaaseti Woodbury County keesati namni qabame harawni 43 dha. Waliigalatti namni qabame erga dhukkubni kun jalqabe irraa ka’e 4,600 gaheera.
Dakota County keesati namni haarawni qabame tokkoodha, Nebraska kesatti namni waliigaltti namni qabame 2080 dha kan du’emmoo 43 dha.
Iowa keessati namni dabalataa sadihii sababa Covid-19 akka du’an gabaafame, nama tokko kan Woodbury
By Fatiya Adam • Sep 14, 2020
Iowa keessati namni dabalataa sadihii sababa Covid-19 akka du’an gabaafame, nama tokko kan Woodbury County keessati du’e dabalatee, namni waliigalati du’e Woodbury keesati du’e 59 gaheera. County keessati namni dabalataan 32 yoo tau akka state guututi se’ati 24 kessati namni qabame 400 dha. Akka dhukubni jalqabame namni waliigalati due 1,222 yoo tau waliigalatti namni qabame ammo 73,000 dha.
Laba maalmood ka dib markii ay ardaydu ku soo laabteen fasalka buuxa ee Degmada Sioux City Community
By Halima Osman • Sep 10, 2020
Laba maalmood ka dib markii ay ardaydu ku soo laabteen fasalka buuxa ee Degmada Sioux City Community School hal fasal waxaa guriga loogu diray barashada dalwaddii.
Dugsiga Nodland wuxuu u wareejiyay hal fasal labaad oo ay ugu yeereen wax ay ugu yeeraan wax ka qabashada xaaladaha deg degga ah ee wax lagu barto.
Taasi waa sababta oo ah dhowr ka mid ah fasalka ayaa laga helay COVID-19 ama waxay muujiyeen astaamo.
Qorshuhu wuxuu yahay inay ardaydu ku noqdaan fasalka Arbacada, Sebtember 23.
Namichi Sioux City hidhaan degree tookoffaa inni murtaahe fi seela jaladuuma qabaa eda galagala eega
By Fatiya Adam • Sep 11, 2020
Namichi Sioux City hidhaan degree tookoffaa inni murtaahe fi seela jaladuuma qabaa eda galagala eega Sioux City keessati nama waraane booda.
Tokko kan waraaname nama dhiira umrii 37 yoo tau kan biraamo dubraa umrii 43 tti. lachuu MercyOne jiruu namichia kan dhiira kan due yoo tai intalii tan dubartii yaalamu jirti.
Namichii shakammaan eega nama waarane seaati tokkoof walakkaa booda karaa 21st fi Nebraska naanawa sanirra kan sochauu argamee jira.
Guyyaa lama booda eega barattooni barumsa guututi deebi’ani manni barumsa Sioux City tokko
By Fatiya Adam • Sep 10, 2020
Guyyaa lama booda eega barattooni barumsa guututi deebi’ani manni barumsa Sioux City tokko barumsa online manaati deebise jira.
Manni barumsaa Nodland kutaa lamaffaa emergensiidhan kara online dhaan barachuti deebisanii jiru.
Sababni isaas barattooni baaye kutaa keessa Covid-19 qabamani jirani akkasumas malattoo isaa mullisani.
Karoori isaanis barattooni guyyaa harbaa September 23rd kara mana barumsaati kan deebian ta’a.